Wireless headphones Sony: mazano. Nhepfenyuro dzisina mutsara ne Sony microphone: zvinobatsira uye zvisingabatsiri
Hatifaniri kutaura kuti tinorarama muzana remakore rechi21. Nguva yekombiki yepamusoro, makombiyuta, makombiyuta asina tambo - izvo zvose izvi uye zvinomiririrwa pamusika muzvikamu zvakawanda kubva kuvakisi vakasiyana-siyana vanobva kumativi ose enyika. Mubvunzo ndeyekuti ungasarudza sei chibereko chakanaka pakati pekugoverwa kwekusimbisa. Pamwe chete nemutengo unodhura kuti upinde muhutano hausi uhu hukuru hwepamusoro, asiwo huri nyore, chivimbiso uye hupenyu hwakareba hwehupenyu. Chinonyanya kukoshesa pane Sony Bluetooth wireless headphones . Imwe mukurumbira wekuJapan yakakurumbira, iyo yave iri pamusika kwemazana makumi emakore, uye nehupamhi, haina kumbove nematambudziko. Regai, zvivako zvemuchina uyu hazvisi muchitengo chine mari, asi, zvishoma, zvinowanikwa kune vakawanda vanotenga. Wadii kuti uzive nemishonga yemhando yakakwana.
Nzira yakarurama yekutenga
Mafonikoni haasi akaenzana neavo vanotenga nokuda kwekuti basa guru rinokosha. Semuenzaniso, nei mabhesifoni ane microphone ari mumhanyi kana kuti kuvapo kwechikwata chiri mumutambo wekutarisa TV? Kuti uite kutenga, iwe unoda chido - tsanangudzo yechinangwa chekushandisa. Zvichida, pachava nezvinangwa zvakadai. Saizvozvowo, iyo inowedzera mabasa, iyo inowedzera mutengo wezvinhu. Mutsara wechipiri hupenyu hwebheteri, hunoenderana zvakananga nechinangwa chekushandiswa. Maawa akawanda ekuvaraidza kwekunze kunoda hukuru hwekuvakwa-mubhateri, panzvimbo yehafu yeawa yekuona firimu. Usakanganwa pamusoro pekushandiswa kwekuvaka, kusungirirwa kubva padanho nekurema. Kunze kwehutano hwekunzwika hwakarasika kuona. Asi kana iwe uchiyeuka kuti mune zvakananga Sony wireless headphones, uye kwete chechina chinonzi Chinese chinonzi zita rakaoma, richava rakanyanya.
Zvigadziri munyika yekodhidhiya yekodhadhi yakaita kuti kuonekwa kwezwi rekudzima rwiyo runonzi Noise kurambidza. Nhepfenyuro dzisina mutsara Sony MDR-ZX550BN - iyo ndiyo muenzaniso. Pengoro shoma, inenge 6-7 zviuru makumi maviri, mutengi anogamuchira chibvumirano chinobvumira kwete chete kungoteerera mimhanzi muhutano hwakanaka, asiwo kubvisa 97% yemanzwi akapoteredza. Ruzha rwekudzima urongwa hwemamiriro akasiyana uye haruna mifananidzi munyika. Muhomwe imwe neimwe ye headphones inogadziriswa pamakironifoni ane simba-refu, anobata mhere dzakapoteredza. Chinhu chakakosha chakagadzirwa mumushanduri chinotsvaga mutsara uyu uye chinozviisa kune vatauriri vane inverse amplitude. Uye sezvinozivikanwa kubva kuchikoro chechikoro, mazwi maviri akafanana ane amplitudes akasiyana anoguma mukati. Mukuwedzera, ma-headphones aikwanisa kushanda mumaoko ega mamiriro emhando, chiremera chakareba uye zviyero, chimiro chekusimudza chine simba uye bhatiri rine simba rinobvumira kuteerera mimhanzi pasina kukanganisa kwemaawa makumi maviri nemaviri.
Mumuviri ane utano, pfungwa dzakanaka
Izvo zvakanyanya kutengeswa kwevanoda mimhanzi zvinogona kufungidzirwa kuti Sony wireless headphone dzemitambo. Mumakore mashomanana adarika, ruzivo rwemagariro evanhu runotungamirirwa nehurumende yeRussia pamusoro pemigumisiro inokuvadza uye kubatsira kwemitambo iri kutanga kubereka zvibereko. Imitambo yemitambo mitsva inozarura mumaguta, zvikamu zviri kuumbwa nemakwikwi zviri kuitwa pamwe chete pakati pevechidiki nevanhu vanoona hupenyu. Vakawanda vemitambo vanokurudzirwa nemimhanzi, saka kune chido chekutenga zvisinganzwisisiki zvisingabatsiri zvinyorwa. Mhinduro yakanaka yevatambi inogamuchira muenzaniso wa Sony MDR-AS800BT. Kubatsira kwavo pamusoro pemakwikwi kwakaderera kuyerwa nekukura, pamwe nekusava nemvura maererano nemazinga ePX4. Kufamba kwebasa iri maawa mana. Izvi hazvikwani kune zvinopfuura rimwe chete.
Yatsva ku weightlifters
Vatambi vakawanda vari muimba yekurovedza vanoedza kusapedza nguva vachitaura, uye vanochengetedzwa kubva kune imwe neimwe ne- headphones akavharwa . Weightlifters inomira kubva kumhomho kwete chete nemuviri wakagadzirirwa. Nguo uye zvigadzirwa zvinosimbisa humwe hwega ega zvakasiyana. Kune vanhu vakadaro, ma-headphones asingasviki Sony ane Walkman player, model NWZ-WH303 yakasikwa. Kuonekwa kwavo kukuru kunonyengedza: imwe mazana matatu-gram device ine 4 GB gwara inokubvumira kushanda nesimba kwemaawa makumi maviri. Kufanana nevatambi uye mabhodhi ekudzora - iwo makuru, nokuda kwemaoko makuru uye akasimba, haasi nyore nyore kuputsa. Nokugadziriswa kwakanaka, headphones haavi akaenzana muboka ravo. Simba guru uye zvinyoro zvinyoro zvinotengesa mutambi chero upi zvake kuti awane chigumisiro chakasarudzwa. Kutonga nemhinduro yevadzidzisi vakawanda, mana gigabytes kuti inyore nhuyo dzaanoda hazvina kukwana. Basa racho harina musoro, nokuti vazhinji vashandisi vanotarisa mushambadziro wekuchengetedza misika uye vanoita mhinduro dzavo dzisina kururama. Kana iwe ukashandura mimhanzi yose yakanyorwa muhupamhi hwepamusoro ye 4 GB panguva, ichava maawa makumi mana. Iyi tsanangudzo inobvisa zvakaipa muma 100% emhosva.
Zvichenese mubasa pa100%
Kushanda pamakombiyuta mune boka guru, zvakaoma zvikuru kutarisa pane basa racho. Kuti abvise ruzha rusingaperi, mitambo ye wireless yekombiyuta inobatsira. Sony MDR-ZX750BN ine ruzivo rwakakura mumutengo nehutano hwepamusoro pamberi pevakwikwidzi. Munguva yemaawa masere ekushanda, mushumiri haazogoni kushungurudzika kubva pakushandisa chigadzirwa. Chiedza chechiedza, chiduku chiduku, chimiro chakanaka uye kusarudzwa kwemavara akawanda kuchabatana mukati mehupi mukati. Iwe unofarira idzi headphones kumba. Kutarisa nyaya dzakatarwa kana kuti firimu pamakombiyuta zvichange zvichikosheswa, vadikani vanogara pamberi pecherechedza kusvikira nguva. Kana bheti yakaneta pane imwe nguva isingaenzaniswi, unokwanisa kuvhara headphones kumakombiyuta kune kombiyuta uchishandisa iyo imwe yehafu yekanda iyo inouya nekiti.
Kune vatevedzeri vemitambo yeInternet
Tankmen, tacticians uye strategists vachave vaifarira michina ye-wireless ine microphone. Sony MDR-XB950BT uye yakavakwa-pasi-pasi-frequency amplifier Bass Boost inopa pfungwa inoshamisa yechokwadi. Sezvinowanzoita kuti ataure ikozvino, chigadzirwa chacho chakanyatsokonzera 3D effect. Mukuwedzera kune inzwi rakanaka, headphones inogona kutaurirana nemarudzi ose emafoni efoni uye inoshanda muHands free mode. Pamusoro penyaya yevatungamiri vefoni vanofonera zvidzitiro zvekutonga zvinopiwa. Iyo microphone inogadzirisa iri mune rumwe rutivi rworuboshwe rwema-headphones uye inoshanda muhuwandu hwemasero kubva pa100 kusvika ku4000 Hz. Kutaura mumakorofoni aya kunonyanya kuve nyore. Kunewo kusagadzikana. Kana iwe ukaisa vhudzi mumusoro-soro kusvika pamwero mukuru, nekuda kwechidimbu chemakrofoni, izwi risingafadzi rakanyanya rinoitika. Maererano nevaridzi vadzo, dambudziko rinonyatsogadziriswa nekugadzirisa manzwiro pamakombiyuta nekunopera kuderedzwa pamakutufoni pachavo.
Kudzorerwa kweimba yemitambo
Sony wireless headphone yeTV ichava nehanya kune vanhu vasina vamiririri vekunze. Kurindira firimu iri pahwindo guru rine rwiyo rwepamusoro rinogona kurongwa uchishandisa mufananidzo we MDR-1ABT. Nhepfenyuro dzisina mutsara dzine rutsigiro rwepamusoro-tsanangudzo audio audio hazvizosiyi kusava nehanya chero mupi wemifananidzo mufirimu. Sorokamullimetrovy HD-hurukuro inounza ruzha muhuwandu hwema4 kusvika 100 000 Hertz, iyo miganhu inenge isingapfuuri nenzeve yevanhu, asi inokonzerwa nemamwe manzwiro, anotungamirirwa nehutachiona hwehurongwa. Kubatsira kwema-headphones kweTV yakagadzirirwa ndeyekuti vanogona kushamwaridzana pamwe chete nemichina yakasiyana-siyana, somuenzaniso, TV nefoni. Iikorofoni yakavakwa mukati uye Maoko ehurongwa hwekusununguka haungakuregi iwe uchinge usiriwe runhare rinokosha. Ikoko kunewo kusagadzikana. Kana bhatiri ikasununguka, iyo inobhadhara mutero kwemaawa anenge makumi matatu, zvingava zvakaoma zvikuru kuongorora iyo firimu pane yakabatana kambo mita imwe yakareba.
Kutanga kwevose - kufamba
Vadzidzisi vemapurofoni vachada matefoni asingasviki nokuda kwefoni Sony SBH80. Chiedza chechiedza uye zviyero, uye pakuwedzera Multipoint basa, zvichibvumira kushamwaridzana kamwechete kune zvigadzirwa zviviri, zvichave zvakakurumbira kwete kwete kwevechiri kuyaruka chete, asi kune vese vene foni, mahwendefa uye zvinyorwa zvehomwe. Pamusoro pe headphones, hutano hunonzwika hunogamuchirwa. Kukanganiswa zvachose kubva kune imwe nyika hakuzobudiriri, asi teerera mimhanzi munzvimbo yakawanda yepamusoro-kwete - hapana dambudziko. Kuti uwane kukwana, Sony yakapa bhati simba. Mutengo we wireless headset yakakwana kwemaawa masere chete ekuteerera kunoramba kuripo. Asi mumirairo yemirayiridzo, maererano nemashoko ezvizvarwa zvevashandi vakawanda vechirongwa ichi, ma-headphones mu switch-on state vanogona kuchengeta mutero kwemwedzi wose. Chiratidzo chacho chakanakisisa, ndicho chaicho chikonzero chekutenga kwakadaro, izvo zvisingashandisi kushandiswa?
Nokugadza mitambo isina wireless pamusika, Sony inopa zvakanakisisa digital amplifiers. Chigadzirwa chacho chiri kure nekusvibiswa, mari yayo iri mumakero makumi matanhatu nemazana makumi matanhatu nemazana matanhatu ejuble uye haigoni kufarira muwandisi wevashandi. Asi vanoda kuteerera ne studio rekodhi uye kutarisa mafirimu muhupamhi hwepamusoro, chikwidziri chepamusoro-soro kubva ku Sony chinoda. Iyo yakavakwa muDAC inokwanisa kuchinja inzwi chero ripi zvaro, maitiro, kuwedzera uye kushandiswa kumakorofoni. Kuvapo kwepfungwa inobatsira kuti uone hurumende yemakodhoni yemisasa ichaumba studio audio pane imwe chete kumba. Vagadziri vemu Sony havana kumira ipapo uye vakapa chipo kune vese vadziri vezvigadzirwa zvemafaira vachiisa pachikwata chemugadziri wechipukirwo che microUSB chekutengesa mafoni nemapiritsi.
Zvimwe zvinogadzirwa naSonon hazvisi muchitengo chakanaka, uye kutendeseka kwayo, kwakagadzirwa kwemakumi emakore, hazvibvumiri kuti humbozha hwekugadzira zvigadzirwa zvakashata uye zvishoma. Inowanzokwanisika kusangana zvisina kunaka maererano neYon. Yakagunzva pamagetsi edzimba, midziyo yemavhidhiyo, mavhidhiyo mavhidhiyo. Kwete uye ma Sony headphones haana wireless. Kuongorora kwevatenzi vezvipfeko zvakadaro hazvina chokwadi kana mushure mokutaura kwekuti mumiririri weSAN yakaramba kudzorera kana kugadzirisa. Kana iwe ukatarisa mukati mechinetso, unogona kuona kuti zvinhu zvakagadzirirwa kugadziriswa zvakanga zvisingazivikanwi, izvo, zvinotumirwa munyika zvisina kukodzera. Saizvozvowo, iyi ichato kana kuti chikafu, hazvifukidzwi nechirongwa. Mhedziso chete ndeyokuti zvakakosha kutenga zvigadzirwa zvemhando dzemunyika mune zvigadzirwa zvepamusoro.
Kutenga Sony wireless headphones, mutengi anogamuchira sechipo kwete kungogutsikana kwehuwandu hweJapan husina kunaka. Mishonga yaSon ine nyaya. Chimwe nechimwe chigadzirwa chakagadzirwa nevakagadziri vakasiyana uye hachina kufanana nezvimwe marongerwo. Iyo yakasiyana nenzira yayo. Kana munyika mune chimwe chinhu chakafanana - chichava chirevo chemuchina waSon. Hazvina basa kuti nyika inoshandiswa sei. Regai bheti rakanyorwa "China" kana "Mexico". Chinhu chikuru ndechokuti mutungamiri wekombiki yepamusoro-soro inobata basa rakazara nekuda kwezvinhu zvaro. Inopa huwandu hweshumiro yehutano uye inotora chivimbiso pasinei nehurumende munharaunda yazvo iyo chigadzirwa chakatengwa.
Kugadzira TP-Link TL-WR741ND router nemaoko ako
ASRock G31M-GS mamabhobhopu: tsanangudzo uye tsanangudzo
Processor Intel Core I3 2120: maitiro, kutonhora
Chigadziro chepurogiramu, sezvo inoshanda
Nzira yekusarudza kombiyuta inotenderera sei?
Chii chinoshandura: kuwana mhinduro yakakwana
Biography pamusoro Dostoevsky. Interesting zvinhu kubva Biography pamusoro Dostoevsky
Chinonyanya kukosha zvirimwa wepagore. Mienzaniso kushandiswa mune zvokurima uye mapindu
Parts Isuzu uye Hyundai
Goodpasture kuti chirwere: Inokonzera, Zviratidzo neMarapirwo Nzira
Striped Hyena (Hyaena hyaena): description, dzinogarisana. nyika mapere
Leonardo Mayer: Biography, mitambo basa, kubudirira, mapikicha
Laufer (shangu) - chii kupfeka? lacquer Lofer
Zvishoma nezvishoma mumatope girazi mikova
Review Huawei Honor 4C. Description smartphone nokurondedzerwa
Mazano nokuti nani Chips
Terentev Aleksandr Vasilevich: Biography, mhuri, dzidzo